Puntland oo Ciidamo farabadan geeysay Degmo ka tirsan Gobolka Sanaag | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Puntland oo Ciidamo farabadan geeysay Degmo ka tirsan Gobolka Sanaag
Puntland oo Ciidamo farabadan geeysay Degmo ka tirsan Gobolka Sanaag
Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa Booliska dowlad Goboleedka Puntland oo wata gaadiidka nooca dagaalka ayaa gaaray degmada Badhan ee Gobolka Sanaag, halkaasoo la qorsheeyay inay ka howlgalaan.
Afhayeenka Madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa sheegay in Maamulka uu Ciidanka Booliska geeyay degmada Badhan, isla markaana ay yihiin Ciidankaas kuwo loogu tala-galay inay sugaan amniga Magaaladaas.
Sidoo kale Afhayeen Jaamac Dabaraani ayaa tilmaamay in Ciidanka ay qeyb ka noqonaan Ciidamada u taagan sugida amniga Gobolka Sanaag, isla markaana looga baahan yahay inay ka hortegaan wax kasta oo amni darro keeni karo.
Shacabka kunool Gobolka iyo Badhan ayuu Afhayeenka Madaxtooyada Puntland ugu baaqday inay la shaqeeyaan laamaha amniga, si looga hortego wax kasta oo amni darro, ayna labada dhinac si dhow iskula shaqeeyaan.
“Puntland waxay magaalada Badhan geysay Ciidamo Booliis ah oo tababaran agabkooduna u dhameystiranyahay, si ay u sugaan amniga degmada iyo guud ahaan Gobolka. Bulshada magaaladda Badhan iyo guud ahaan Gobolka Sanaag waxaan ka rajeynaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan Ciidamada” ayuu yiri Jaamac Dabaraani.
Ugu dambeyn Jaamac Dabaraani ayaa Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uga mahadceliyay dadaalka uu ku bixiyey xasilinta siyaasadda Gobolka, tayeynta ciidamada iyo dhismaha xarumaha hay’addaha maamulkaas
Previous articleDalka Koonfurta Kuuriya: Ma noqon sidaan mooday! (Warbixin wadata Macluumaad & Cajaa’ib)
Next articleNorway oo dib u fureysa Safaaradeedii Magaalada Muqdisho